UMphathiswa: I-Iran neGeorgia kufuneka badibanise iinkqubo zeekhadi lebhanki ukukhulisa ukhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia » UMphathiswa: I-Iran neGeorgia kufuneka badibanise iinkqubo zeekhadi lebhanki ukukhulisa ukhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIran eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Iran icebise ukudibanisa iinkqubo zayo zamakhadi ebhanki kunye neGeorgia kwinyathelo lokunyusa ingeniso yezokhenketho kula mazwe mabini.
Esi siphakamiso senziwe nguMphathiswa Wezomnotho nezezimali e-Iran uMasoud Karbasian kwintlanganiso namalungu epalamente yase-Georgia.
"Isiseko sokusebenzisana kwebhanki phakathi kwala mazwe mabini siza kusekwa ngendlela eza kuvumela ukusetyenziswa kwamakhadi ebhanki e-Iran nase-Georgia ngabantu abakumazwe abo," ucatshulwe watsho uKarbasian.
NgoDisemba ophelileyo, kwabhengezwa apha ukuba i-Iran ne-Russia bakwinkqubo yovavanyo lokudibanisa iinkqubo zabo zokuhlawula iibhanki.
"Kuza kubakho amakhadi aqhelekileyo okusetyenziswa kwabathengi aphesheya," utshilo uDavood Mohammad Beigi, umlawuli weSebe leNkqubo yokuHlawula yeBhanki eNkulu yase-Iran.
Inkqubo yolwakhiwo lwezibonelelo zokudityaniswa kweenkqubo zentlawulo zamanye amazwe izakuthatha ubuncinci iinyanga ezili-10, wongeze watsho.